माइती जान्छु’ भनेर हिडेकी म’हिला प्रे’मीसंग होटलमा रात बिताउन पुगेपछि…. - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माइती जान्छु’ भनेर हिडेकी म’हिला प्रे’मीसंग होटलमा रात बिताउन पुगेपछि….
करिब चार वर्ष प्रे’ममा रहेका एक यवक अहिले हिरासत र अदालतको चक्कर काट्दैछन् ।
काभ्रेका २३ वर्षीय नजर (नाम परिर्वनत) र रामेछापकी २२ वर्षीय निभा (नाम परिर्वतन) चार वर्षसम्म माया प्रेममा रमाए । उनीहरुबीचको स’म्बन्धमा बाकीँ केही रहेन, सबै भयो । तर करिब तीन साता अगाडी त्यो प्रे’म कहानीले अर्कै रुप लियो । परिवारको आ’ग्रहमा नजरले विदेशममा बस्दै आएकी एक यु’वतीसंग बि’वाह गरे ।
त्यसपछि प्रे’मीका निभाले आफुलाई प्रलोभनमा पारेर यौ’न शो’षण गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दिइन् । निभाले प्रहरीमा दिएको उजुरी अनुसार आफुलाई वि’वाह गर्छु भन्दै प्रलोभनमा पारेर पटक –पटक शा’रिरीक स’म्बन्ध राख्दै आएको आरोप लगाएकी छिन् ।
यो घटनामा निभाले वि’वाह गरेकी श्रीमतीसंग नजरले स’म्ब’न्ध बि’च्छेद गरे आफु मुद्धाबाट पछि हट्ने सं’केत निकटका मानिससंग गरेको स्रोत बताउँछ । यसरी प्रेममा धोका भएपछि पनि प्रहरीमा आएर यौ’न शो’षण, बल’त्कार, जबरजस्ती क’रणीको आ’रोप लगाउदैं उजुरी दिन आउनेको सं’ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अर्को घटना श्रीमानको यौन यातना सहन नसकेको भन्दै एक महिला केही समय अगाडी भक्तपुर प्रहरीमा पुगिन् । पोर्न फिल्मको लत लागेका उनका ४० वर्षका श्रीमानको दैनिक व्यवहारले ३४ वर्षकी ती म’हिला आजित भइन् । प्रहरीका अनुसार पारिवारीक हिसाबले निकै उ’च्च वर्गका उनीहरुको जिवन ४ वर्ष यताको अवस्था श्रीमतीले वर्णन गर्दा निकै दुःखद थियो ।
वि’वाह गरेको १३ वर्ष पुगेका ती जोडीको ११ वर्षका छोरा छन् । तर श्रीमानको बानी भने म’हिलाले सहन नसक्ने थियो । ४ वर्षसम्म घर परिवार र बच्चाकोलागि सहदै आएकी उनले अन्तत उजुरी गर्न बाध्य भइन् । म’हिलाले प्र’हरीलाई भनेकी छिन् ‘दैनिक हात खुट्टा बाँधेर सात पटकसम्म शा’रिरीक स’म्बन्ध राख्नु पर्ने श्रीमानलाई त्यो अपराध मैले सहन सकिन् ’ ।
श्रीमतीलाई पशुतु’ल्य गरेर शा’रिरीक सम्ब’न्ध राख्ने ती पु’रुषको खराब बानी सुनेर आफन्त र छिमेकका सबैजना चकित परे । अर्को घटनामा रामेछाप घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका एक बि’वाहीत जोडीको बि’वाहउत्तर स’म्बन्धले नि’म्त्याएको सं’कट छ । श्रीमान श्रीमतीलाई ंंश’का गर्ने गर्दै आएका थिए ।
तर एक दिन श्रीमतीले असारमा श्रीमानले आफुलाई जबरजस्ती क’रणी गरेको भदै साउनको अन्तिम साता उजुरी दिइन् । म’हिलाको उजुरी अनुसारले प्र’हरीले उनका श्रीमानलाई प’क्राउ ग¥यो । तर अनु’स’न्धानको क्रममा केही यस्ता रहस्य बाहिर आए जुन उनीहरुको दुबै जनाको बाहिर स’म्बन्ध थियो ।
तेस्रो व्य’क्तिको प्रवेश त्यो घटनामा भएपछि म’हिलाले श्रीमानलाई जबर’जस्ती कर’णी गरेको आ’रोप लगाइन् । प्रह’रीका अनुसार घटनाको अन्तिमसम्म अनु’स’न्धान गर्दै जादाँ कतिपयमा म’हिलाको कमजोरी भेटिएपछि उनीहरुले अदालतमा गएर बयान फेर्न गरेका छन् ।
माइती जान्छु भनेर घरबाट निस्केकी एक म’हिला प्रे’मीसंग भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको एक होटलमा रात बसिन् । उनी माइती नपुगेको श्रीमानले थाहा पाएपछि श्रीमतीले घटनालाई अर्कै मोड दिइन् । श्रीमान र घर परिवारले थाहा पाएपछि उनले रात संगै बसेको पु’रुषले आफुलाई बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।
त्यसपछि प्रहरीले ती पु’रुषलाई नियन्त्रमा लियो । तर अदालत पुगेपछि महिलाले यस्तो बयान दिइन् जुन बयानपछि अदालतले समेत प्र’हरीलाई चेतावनी दियो । म’हिलाले ती पु’रुषसंग आफुले राजीखुसी यौ’न स’म्बन्ध राखेको र प्रहरीले उजुरीमा के लेखेको थाहा नभएको दाबी गरिन् ।
पहिला ब’लात्कार ग¥यो भन्ने म’हिलाले पछि किन त्यस्तो गरिन् प्रहरी आफैं अन्योलमा प¥यो । म’हानगरीय प्र’हरी परिसर भक्तपुरका प्र’वक्ता प्रहरी उप’रिक्षक रेवति रमण पोखरेलका अनुसार भक्तपुरमा पछिल्लो वर्ष घरेलु र यौन हिंसा बढ्ेको देखिन्छ ।
उनका अनुसार समुदाय प्र’हरी सा’झेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत जिल्लाका गाउँ–गाउँमा पुगेर घरेलु हिं’साका बारेमा जनचेतना मुलक गतिविधी गर्दै आएकाले पनि महिलाहरुमा हिंसा सहनु हुदैंन् भन्ने धारणा विकशित भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा भक्तपुर प्रहरीले यौ’न हिं’साका मात्र ३४ मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
जसमा कानुनले तोकेको उमेर भन्दा कम उमेरका कि’शोरीसंग यौ’न स’म्बन्ध राख्नेको संख्या करिब ५० प्रतिशत छ । सा’माजिक सं’जालको अ’त्यधिक प्रयोगका का’रणपनि सानै उमेरमा यौ’न स’म्बन्ध राख्ने यु’वायु’वतीको सं’ख्यामा वृद्धि भएको प्रहरीको भनाई छ ।
नेपालको व’र्तमान कानून अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका यु’वतीसंग सहमतिमा यौ’न स’म्बन्ध राखेपनि अपराध मानिन्छ । विगतमा उक्त उमेरको हद १६ वर्ष थियो । केही गलत नियत भएका म’हिलाहरुका कारण साच्चैनै यौ’न हिं’सा पीडित म’हिलालाई समेत समाजले हेर्न दृ’ष्टिकोण ग’लतहुन थालेको छ ।
श्रीमान हुदाँ हुदैं परपु’रुषसंग स’म्बन्ध राख्ने र बाहिर हल्ला भएपछि वा पैसा लेनदेनको कुरा नमिल्दापनि बलात्कारको आरोप लगाउदैं उजुरी दिने केही म’हिला छन् । त्यस प्रकारका म’हिलाले अदालतमा गएर प्र’हरीमा दिए भन्दा फरक ब’यान दिने गर्नाले प्रह’रीलाई कुनै समय स’मस्या आउने गरेको छ । एजेन्सी